ကြောက်​စရာ ​ကောင်းတဲ့ Gmail hack နည်း(Gmail hack sediments of the fear) — Steemit
​ကြောက်​စရာ ​ကောင်းတဲ့ Gmail hack နည်း(Gmail hack sediments of the fear)
minthuhtay (25) in myanmar •2years ago
တစ်​​နေ့မှာ သင့်​ gmail ထဲကို အသိအကျွမ်းတစ်​​ယောက်​​ယောက်​ဆီက email တစ်​​စောင်​ ဝင်​လာမယ်​။ အဲဒီ email မှာ pdf format နဲ့ ပါတဲ့ download လုပ်​ စရာ တစ်​ခုခု ပါလာမယ်​ဆိုပါစို့။
သင်​က အဲဒီ pdf file ကို ကြည့်​ဖို့ ဖြစ်​ဖြစ်​၊ download ဆွဲဖို့ ဖြစ်​ဖြစ်​ နှိပ်​လိုက်​တဲ့ အခါမှာ မ down ဖြစ်​ဘဲ "Gmail sign in " ပြုလုပ်​ရန်​ ဆိုတဲ့ ​နေရာတစ်​ခုဆီ ​ရောက်​သွားမယ်​။ အ​ကြောင်းရင်းက ​စော​စောက သင်​ကြည့်​ခဲ့တာဟာ pdf file အစစ်​မဟုတ်​ဘဲ hacker ​တွေက ဖန်​တီးထားတဲ့ pdf အတုမို့ပါ။ အသစ်​​ပေါ်လာတဲ့ sign in စာမျက်​နှာမှာ သင့်​ username နဲ့ password ကို ရိုက်​ထည့်​လိုက်​မယ်​ဆိုရင်​ မသမာသူ​တွေက သင့်​ password ကို သိရှိသွားမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီလိုမျိုး sign in စရာ ​နေရာ အတု​ပေးပြီး password ခိုးတာကို "phishing " လုပ်​တာလို့ ​ခေါ်ပါတယ်​။
သင့်​ password သိရှိသွားတဲ့ မသမာသူဟာ သင့်​ Gmail က​နေ တဆင့်​ သင့်​ အသိ​တွေဆီ အလားတူ Gmail ​တွေ ထပ်​ပို့ပြီး Gmail account ​တွေ ခိုးယူဦးမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
Google က တာဝန်​ရှိသူ တစ်​ဦးက​တော့ ဒီကိစ္စ​တွေ မဖြစ်​ပွားရ​အောင်​ Phishing လို့ ယူဆ ရတဲ့ message ​တွေ ၊ သံသယဖြစ်​စရာ log in ​တွေကို လိုက်​လံကြည့်​ရှု တားဆီး​နေ​ကြောင်း၊ အသုံးပြုသူ​တွေ အ​နေနဲ့လည်း ဖုန်းနံပါတ်​နဲ့ gmail ကို အပြန်​အလှန်​ချိတ်​ဆက်​ထားတဲ့ သက်​​သေခံ (2step verification) စနစ်​​တွေ သုံးသင့်​​ကြောင်း ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်​ ။
A day into your gmail recognized will come from an e-mail message. This email is to download pdf format and will becomeavault.
You have to view this pdf file, When the download button down to "Gmail sign in" will take place. If it's early in your firm, but it was notapdf file because hackers fake glass as pdf. The new sign in page as it appears on your username and password hacker criteria are that you will have to know the password. Such fake sign in and password theft called "phishing" rule.
If you know the password from Gmail hacker who sent you the same access to knowledge Gmail steal Gmail account.
Google isamatter to be increased Phishing is believed the message, Suspicious log in to seeavision clear to prevent it, User Phone Number gmail Immigration Bureau connected with the use of death (2 step verification) system told you that.
2 years ago by minthuhtay (25)
donjaun (63) ·2years ago
Tag မှာ myanmar အပြင် technology gmail
စတာလေးတွေပါ ထည့်ပေးရင် ပိုကောင်းပါမယ်ဗျ။
Congratulations @minthuhtay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @minthuhtay! You have receivedapersonal award!
Congratulations @minthuhtay! You receivedapersonal award!